အကောင်းဆုံးဆိုတာဘာလဲ Custom Watch Dials? အကောင်းဆုံး Custom Watch Dials အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကိုထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှရှာဖွေရန်။
Xing Heart Enterprise Partnership ဦးဆောင်သည် Taiwan ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ Custom Watch Dials သောအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကုန်ကြမ်းမှအင်ဂျင်နီယာနှင့်၎င်းတို့၏ကြံ့ခိုင်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်တာရှည်ခံဝန်ဆောင်မှုအသက်အဘို့အအသိအမှတ်ပြုသည်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်မြင့်မားယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တာရှည်ခံအရည်အသွေးမြင့်မားကုန်ကြမ်းကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်ပြီးမတူကွဲပြားသောဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်တွေလည်းရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်လူနေအိမ် applications များအများအပြားအမျိုးအစားများအတွက်အသုံးပြုသည်နှင့်ပုံစံများအမျိုးမျိုးရရှိနိုင်ပါတယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးနိုင်ငံတကာစျေးကွက်အနှံ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုပြန့်ပွားခြင်းဖြင့်မြင့်မားသောဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ဈေးနှုန်းများမှာ availed နိုင်ပါသည်။
စိတ်ကြိုက်စောင့်ကြည့်ရေးနာရီ Dial Printing
သင်နှင့်ကျွန်ုပ်၏သဲလွန်စများကိုဖော်ပြပါ,နှင့်ဘဝ၏ရင်ခုန်စရာဇာတ်ကွက်များနှင့်အောက်မေ့ဖွယ်နေ့ရက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်ဇာတ်လမ်းအဖြစ်ဖော်ပြပါ.Surface Carving သည်အထိမ်းအမှတ်သို့မဟုတ်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောပုံစံများနှင့်စာကြောင်းများကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြသနိုင်သည်.လိုအပ်သောထုံးစံစာသားနှင့်အကြောင်းအရာများကိုပေးပါ,ဒီဇိုင်းပညာရှင်သည်စာရိုက်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုင်ရာစာဖတ်ခြင်းတွင်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်,အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးသည်သင်၏နှလုံးသားနှင့်အဖြစ်အပျက်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေရန်ဖြစ်သည်. မျက်နှာပြင်အမှတ်အသားနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများအကြောင်း [မျက်နှာပြင်အမှတ်အသား]ရိုးရှင်းပြီးအနိမ့်-သော့ချက်စတိုင်အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှုလေယာဉ်ပေါ်တွင်အနည်းငယ်ခွက်သဲလွန်စဖြစ်ပါတယ်,နှင့်အရောင် beige fixed ဖြစ်ပါတယ်(panel ကိုပစ္စည်း၏အရောင်)နှင့်အရောင်ကိုမရွေးနိုင်ပါ. [ရွှေမျက်နှာပြင်]နူးညံ့သိမ်မွေ့သောနူးညံ့သော textureသတ္တု texture,ထွက်လာလိုင်းများ,အရောင်တွေထဲကတစ်ခု(ရွှေနှင်းဆီ/ငွေ/အနက်ရောင်)စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်. ▲【လက်ရာမြောက်သောနေရောင်ခြည်】မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိနေ့စွဲ ၀ င်းဒိုးနှင့်လိုဂိုများ၏အနေအထားကိုရှောင်ပါ,သည်အခြားကွက်လပ်ထုတ်လုပ်မှု၏နယ်ပယ်အတွင်းမရှိကြပေ. ▲【ရောမဖက်ရှင်】မူလမျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်းကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တင်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ.3.6.9,နှင့်အခြားကွက်လပ်ထုတ်လုပ်မှုအကွာအဝေးအတွင်းဖြစ်ကြသည်. ▲【ရိုးရှင်းသောဂန္ထဝင်】ပစ္စည်းကြောင့်,မျက်နှာပြင်အမှတ်အသားဂန္စတိုင်မျက်နှာပြင်များထုတ်လုပ်မှုကိုထောကျပံ့မထားဘူး. သတ်မှတ်ချက်များကြောင့်,ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခြားအချက်များ,ID သာ.နာရီနာရီရရှိနိုင်ပါသည် အမှာစာကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်မျက်နှာပြင်အမှတ်အသား 10 ဖြစ်ပါတယ်-၁၅ ရက် Jinzhi Surface မှာယူမည့်အချိန်မှာအမိန့်ကိုအတည်ပြုပြီးရက်ပေါင်း ၃၀ ဖြစ်သည် သငျသညျပုံစံများကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်,သငျသညျလိုင်းရေးဆွဲပေးရပါမည် မူပိုင်ခွင့်ပုံစံများကိုအသုံးပြုခြင်းအားတားမြစ်သည် စိတ်ကြိုက်နာရီတွေကိုထောက်ပံ့ပါ:ရောမဖက်ရှင်｜လက်ရာမြောက်သောနေရောင်ခြည်
အကောင်းဆုံး Custom Watch Dials ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် Custom Watch Dials ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ Custom Watch Dials ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
ဓာတ်ပုံများသည်လူတို့၏စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်,ထို့အပြင်သူတို့သည်အချိန်ကိုဆေးကြောခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်လှပသောအမှတ်တရများဖြစ်သည်.ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအခိုက်အတန့်ကိုထာဝရအသက်လမ်းကြောင်း၌သိမ်းဆည်းထားသည်.သင်အနှစ်သက်ဆုံးဓာတ်ပုံကိုရွေးချယ်ပြီးမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ,ပျော်ရွှင်သောအခိုက်အတန့်ကိုပြရန်သာဖြစ်သည်,ဒါပေမယ့်လည်းထိုအချိန်၏စိတ်ခံစားမှုများနှင့်အမှတ်တရများကိုနှိုးဆော်ဖို့. မျက်နှာပြင်အမှတ်အသားနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများအကြောင်း [မျက်နှာပြင်အမှတ်အသား]ရိုးရှင်းပြီးအနိမ့်-သော့ချက်စတိုင်အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှုလေယာဉ်ပေါ်တွင်အနည်းငယ်ခွက်သဲလွန်စဖြစ်ပါတယ်,နှင့်အရောင် beige fixed ဖြစ်ပါတယ်(panel ကိုပစ္စည်း၏အရောင်)နှင့်အရောင်ကိုမရွေးနိုင်ပါ. [ရွှေမျက်နှာပြင်]နူးညံ့သိမ်မွေ့သောနူးညံ့သော textureသတ္တု texture,ထွက်လာလိုင်းများ,အရောင်တွေထဲကတစ်ခု(ရွှေနှင်းဆီ/ငွေ/အနက်ရောင်)စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်. ▲【လက်ရာမြောက်သောနေပုံစံ】မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိနေ့စွဲနှင့်အမှတ်အသား၏အနေအထားကိုရှောင်ပါ,နှင့်အခြားအလွတ်နေရာများထုတ်လုပ်မှု၏နယ်ပယ်အတွင်း၌ရှိကြ၏. ▲【ဖက်ရှင်ရောမစတိုင်】မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိမူလမျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်း၏အနေအထားကိုရှောင်ပါ.3.6.9,နှင့်အခြားအလွတ်နေရာများထုတ်လုပ်မှု၏နယ်ပယ်အတွင်း၌ရှိကြ၏. ▲【ရိုးရှင်းသောဂန္ထဝင်စတိုင်】ပစ္စည်းကြောင့်,မျက်နှာပြင်အမှတ်အသားဟာဂန္စတိုင်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအောင်ထောက်ခံပါဘူး. သတ်မှတ်ချက်များကြောင့်,ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခြားအချက်များ,ID ပေါ်တွင်သာရရှိနိုင်ပါသည်.နာရီနာရီ ထုတ်လုပ်မှုအချိန်အမှတ်အသားသည် ၁၀ ဖြစ်သည်-အမိန့်ကိုအတည်ပြုပြီးနောက် 15 ရက် Jinzhi မျက်နှာပြင်မှာယူမည့်အချိန်မှာအမိန့်ကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ရက်ပေါင်း ၃၀ ဖြစ်သည် စျေးနှုန်းမှာဓာတ်ပုံပါဝင်သည်(လူ ၂ ယောက်ထဲမှာ)ပုံတူမျဉ်းပုံဆွဲခြင်း. (ကြောင်များ/ခွေး/အရုပ်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ...နှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုလည်းလူတစ် ဦး အဖြစ်ရေတွက်နေကြသည်,အပိုလူများကိုသီးခြားဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်) သင်ပုံတူထက်အခြားပုံစံများကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်,နောက်ခံအဖြူရောင်တွင်အနက်ရောင်လိုင်းများကိုသင်ပုံစံချရမည် မူပိုင်ခွင့်ပုံစံများအသုံးပြုခြင်းကိုခွင့်မပြုပါနှင့် စိတ်ကြိုက်နာရီတွေကိုထောက်ပံ့ပါ:ရောမဖက်ရှင်｜လက်ရာမြောက်သောနေရောင်ခြည်
Watch Watch Dial ပုံနှိပ်ခြင်း
အလွန်ကောင်းမွန်သောဘဝသည်သင်ကိုယ်တိုင်ဝါသနာများနှင့်နှစ်သက်မှုများကိုခံစားရန်ဖြစ်သည်,အစားအစာနှင့်နေ့စဉ်အချိန်လေးကိုမြည်းစမ်း,ပြီးတော့ဒီအထူးအချိန်လေးများနှင့်စင်ကြယ်သောမူလရည်ရွယ်ချက်များကိုဘ ၀ တွင်မှတ်တမ်းတင်ရန်အတွေးအချို့ကိုဖြုန်းတီးပါ,ထိုသို့အားဖြင့်အသက်တာ၌ရိုးရာဓလေ့၏အဓိပ္ပာယ်တိုးပွားလာ.သင်၏အချိန်တွင်သင်၏ဘဝကိုဒီဇိုင်းထုတ်ပါ,သင်ပြုံးနိုင်သည့်ဤအချိန်လေးကိုမှတ်မိနိုင်သည်.Jinzhi ၏မျက်နှာပြင်သည်မြင့်မားသည်-texture နှင့်အသက်ရှုအဆုံးသတ်,နှင့်အသေးစိတ်လက်ရာမြောက်သောနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဖြစ်ကြသည်,သောလက်ရာမြောက်သောအသက်တာ၏စိတ်ထားနှင့်အရသာထုတ်ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်. သတ္တုကိုယ်ထည်အပေါ်ယံမျက်နှာပြင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများအကြောင်း [မျက်နှာပြင်အမှတ်အသား]ရိုးရှင်းပြီးအနိမ့်-သော့ချက်စတိုင်အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှုလေယာဉ်ပေါ်တွင်အနည်းငယ်ခွက်သဲလွန်စဖြစ်ပါတယ်,နှင့်အရောင် beige fixed ဖြစ်ပါတယ်(panel ကိုပစ္စည်း၏အရောင်)နှင့်အရောင်ကိုမရွေးနိုင်ပါ. [ရွှေမျက်နှာပြင်]နူးညံ့သိမ်မွေ့သောနူးညံ့သော textureသတ္တု texture,ထွက်လာလိုင်းများ,အရောင်တွေထဲကတစ်ခု(ရွှေနှင်းဆီ/ငွေ/အနက်ရောင်)စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်. ▲【လက်ရာမြောက်သောနေရောင်ခြည်】မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိနေ့စွဲ ၀ င်းဒိုးနှင့်လိုဂိုများ၏အနေအထားကိုရှောင်ပါ,သည်အခြားကွက်လပ်ထုတ်လုပ်မှု၏နယ်ပယ်အတွင်းမရှိကြပေ. ▲【ရောမဖက်ရှင်】မူလမျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်းကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တင်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ.3.6.9,နှင့်အခြားကွက်လပ်ထုတ်လုပ်မှုအကွာအဝေးအတွင်းဖြစ်ကြသည်. ▲【ရိုးရှင်းသောဂန္ထဝင်】စကေးနှင့်လိုဂိုအနေအထားကိုရှောင်ကြဉ်ပါ,အလယ်၌ကွက်လပ်မှာလုပ်နိုင်သောအကွာအဝေးဖြစ်သည်. သတ်မှတ်ချက်များကြောင့်,ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခြားအချက်များ,ID သာ.နာရီနာရီရရှိနိုင်ပါသည် အမှာစာကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်မျက်နှာပြင်အမှတ်အသား 10 ဖြစ်ပါတယ်-၁၅ ရက် Jinzhi Surface မှာယူမည့်အချိန်မှာအမိန့်ကိုအတည်ပြုပြီးရက်ပေါင်း ၃၀ ဖြစ်သည် သငျသညျပုံစံများကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်,သငျသညျလိုင်းရေးဆွဲပေးရပါမည် မူပိုင်ခွင့်ပုံစံများကိုအသုံးပြုခြင်းအားတားမြစ်သည် စိတ်ကြိုက်နာရီတွေကိုထောက်ပံ့ပါ:ရောမဖက်ရှင်｜လက်ရာမြောက်သောနေရောင်ခြည်｜ရိုးရှင်းသောနှင့်ဂန္
လူတထောင်၏မျက်စိ၌ငါရှိ၏,ငါ့မျက်မှောက်၌သင်သည်အရောင်တောက်သောဖြစ်တည်ခြင်းဖြစ်၏.စိတ်တိုင်းကျ-လုပ်ပုံတူမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရွှေကိုလုပ်နေကြသည်,တောက်ပသောကျက်သရေကိုပြသသည့်လက်ရာမြောက်သောလိုင်းများဖြင့်ဖြစ်သည်,သင်၏ဖြစ်တည်မှု၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပိုမိုတောက်ပဖြည့်စွက်. မျက်နှာပြင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်နေသောကိစ္စများအကြောင်း [မျက်နှာပြင်အမှတ်အသား]ရိုးရှင်းပြီးအနိမ့်-သော့ချက်စတိုင်အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှုလေယာဉ်ပေါ်တွင်အနည်းငယ်ခွက်သဲလွန်စဖြစ်ပါတယ်,နှင့်အရောင် beige fixed ဖြစ်ပါတယ်(panel ကိုပစ္စည်း၏အရောင်)နှင့်အရောင်ကိုမရွေးနိုင်ပါ. [ရွှေမျက်နှာပြင်]နူးညံ့သိမ်မွေ့သောနူးညံ့သော textureသတ္တု texture,ထွက်လာလိုင်းများ,အရောင်တွေထဲကတစ်ခု(ရွှေနှင်းဆီ/ငွေ/အနက်ရောင်)စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်. ▲【လက်ရာမြောက်သောနေပုံစံ】မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိနေ့စွဲနှင့်အမှတ်အသား၏အနေအထားကိုရှောင်ပါ,နှင့်အခြားအလွတ်နေရာများထုတ်လုပ်မှု၏နယ်ပယ်အတွင်း၌ရှိကြ၏. ▲【ဖက်ရှင်ရောမစတိုင်】မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိမူလမျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်း၏အနေအထားကိုရှောင်ပါ.3.6.9,နှင့်အခြားအလွတ်နေရာများထုတ်လုပ်မှု၏နယ်ပယ်အတွင်း၌ရှိကြ၏. ▲【ရိုးရှင်းသောနှင့်ဂန္ထဝင်စတိုင်】1 ၏အနေအထားကိုရှောင်ကြဉ်ပါ-မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် 12 စကေးနှင့်လိုဂို,နှင့်အလယ်၌အလွတ်အာကာသအောင်၏အကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်. . သတ်မှတ်ချက်များကြောင့်,ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခြားအချက်များ,ID ပေါ်တွင်သာရရှိနိုင်ပါသည်.နာရီနာရီ ထုတ်လုပ်မှုအချိန်အမှတ်အသားသည် ၁၀ ဖြစ်သည်-အမိန့်ကိုအတည်ပြုပြီးနောက် 15 ရက် Jinzhi မျက်နှာပြင်မှာယူမည့်အချိန်မှာအမိန့်ကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ရက်ပေါင်း ၃၀ ဖြစ်သည် စျေးနှုန်းမှာဓာတ်ပုံပါဝင်သည်(လူ ၂ ယောက်ထဲမှာ)ပုံတူမျဉ်းပုံဆွဲခြင်း. (ကြောင်များ/ခွေး/အရုပ်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ...နှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုလည်းလူတစ် ဦး အဖြစ်ရေတွက်နေကြသည်,အပိုလူများကိုသီးခြားဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်) သင်ပုံတူထက်အခြားပုံစံများကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်,နောက်ခံအဖြူရောင်တွင်အနက်ရောင်လိုင်းများကိုသင်ပုံစံချရမည် မူပိုင်ခွင့်ပုံစံများအသုံးပြုခြင်းကိုခွင့်မပြုပါနှင့် စိတ်ကြိုက်နာရီတွေကိုထောက်ပံ့ပါ:ရောမဖက်ရှင်｜လက်ရာမြောက်သောနေရောင်ခြည်｜ရိုးရှင်းသောနှင့်ဂန္